विलियनका लागि बार्सिलोनाले गर्यो तेस्रोपटक महँगो बीड – Khel Dainik
सैनिक युथ, झापा बन्यो प्रदेश १ लिग च्याम्पियन • प्रदेश १ लिग : झापा फाइनलमा, उपाधिका लागि मोरङसँग भिड्ने • प्रदेश १ लिग : बेलबारी एफसी, मोरङ उपाधि नजिक • नेपालको ऐतिहासिक ‘क्लिन स्वीप’ • पारसको शानदार पारीमा नेपाललाई सिरिजमा अग्रता •
विलियनका लागि बार्सिलोनाले गर्यो तेस्रोपटक महँगो बीड
श्रावण ६, २०७५ | (PostaComment)
एजेन्सी । स्काई स्पोर्टस् न्युजका अनुसार बार्सिलोनाले चेल्सीका ब्राजिलियन विंगर विलियनका लागि ५५ मिलियन पाउण्ड भन्दा बढी रकमको तेस्रो पटक प्रस्ताव गरेको छ ।
स्मरणीय छ कि ला लिगा च्याम्पियनले पछिल्लो साता पनि ५३ मिलियन पाउण्डको दोस्रो बीड गरेको थियो । जुन बीडलाई चेल्सीले अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि यसबारे दुवै क्लबका प्रतिनिधिबीच आवश्यक कुराकानी जारी रहेको छ ।
BREAKING: Sky sources – @FCBarcelona make third bid in excess of £55m for @ChelseaFC winger Willian #SSN pic.twitter.com/maor22ka8j
— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2018
स्काई स्पोर्टस्को दावी अनुसार बार्सिलोनाले विलियनका लागि तीन महिना अघि पहिलोपटक बीड गरेको थियो । त्यतिबेला स्पेनीस जायन्ट विलियनले च्याम्पियन्स लिगको प्रिक्वाटरफाइनलमा गरेको प्रदर्शनबाट प्रभावित भएको थियो ।
विलियन पछिल्लो सिजन चेल्सीको बर्ष खेलाडी घोषित भएका थिए र च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोनाविरुद्ध चेल्सीका लागि विलियनले मात्र गोल गरेका थिए । एटलेटिको मेड्रिडका स्टार फरवार्ड एन्टोइन ग्रीजमन नोउ क्याम्प नआउने भएपछि बार्साले विलियनप्रति चासो दिन शुरु गरेको थियो र त्यसका लागि क्याटलन क्लब अझै प्रयासरत छ ।
Barcelona have reportedly madeathird bid for Chelsea’s Willian, according to @SkySportsNews pic.twitter.com/TNcErQ0a2o
— B/R Football (@brfootball) July 20, 2018
बार्सिलोना बाहेक म्यानचेष्टर युनाइटेडले पनि विलियनमाथि चासो दिईरहेको छ । तर चेल्सीले आफ्नो निकट प्रतिद्वन्द्वीलाई आफ्नो स्टार विंगर बेच्न चाहँदैन । चेल्सीले हालै आफ्नो पूर्व म्यानेजर एन्टोनियो कोन्टेलाई बर्खास्त गरेको थियो । कोन्टेसँग विलियनको राम्रो सम्बन्ध नरहेको बताईन्छ ।
अहिले आएर विलियनका लागि गरिएको कुनै पनि प्रस्तावका लागि चेल्सीले आफ्नो वर्तमान म्यानेजर मौरिजियो सार्रीसँग सल्लाह गर्न चाहन्छ । चेल्सीले विलियनका लागि ७० मिलियन युरोको मुल्य तोकेको छ । विलियनले चेल्सीका लागि २३६ खेल खेल्दै ४४ गोल समेत गरेका छन् ।
← नेमार र एम्बाप्पेबीच निकै विशेष सम्बन्ध छ : खलिफी सिरि ए लाई फेरि महान बनाउनेछन् ‘जिनियस’ रोनाल्डो : नेमार →
पौडी टोली कोरिया जाने श्रावण ६, २०७५
स्वर्ण र कीर्तिमानधारी खेलाडी पुरस्कृत श्रावण ६, २०७५
विश्वकपको दोस्रो चरणको ड्र आज, को–को बन्लान् नेपालको प्रतिद्वन्द्वी ? श्रावण ६, २०७५
प्रदेश ५ टिम च्याम्पियन श्रावण ६, २०७५
प्रदेश १ लिग : बेलबारीका सुब्बा बने प्रतियोगिता कै ‘बेस्ट’ श्रावण ६, २०७५
कुङफुमा नेपाललाई ५ स्वर्ण श्रावण ६, २०७५
सैनिक युथ, झापा बन्यो प्रदेश १ लिग च्याम्पियन
खेलमैदान निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने पाँच पक्षहरु
प्रदेश १ लिग : बेलबारीका सुब्बा बने प्रतियोगिता कै 'बेस्ट'
विश्वकपको दोस्रो चरणको ड्र आज, को–को बन्लान् नेपालको प्रतिद्वन्द्वी ?
तनहुँमा रङ्गशाला निर्माण प्रकृया शुरू, डिपीआर पनि तयार
Email: kheldain[email protected]